‘ओली–प्रचण्डसामु दुई विकल्प छन् : महानायक हुने कि खलनायक ?’ - Primekhabar.com
अन्तर्वार्ता प्राइम समाचार बैनर न्युज भर्खरै विचार समाचार
१२ आश्विन २०७७, सोमबार प्राइम खबर डेस्क	0 Comments	शंकर पोखरेल
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलसँगको कुराकानी
स्थायी समिति बैठकपछि नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्ष र अन्तरविरोध समाधान भएको हो वा लेनदेनमा पुगेर अस्थायी युद्धविराम ? कसरी बुझ्ने ?
विवाद र बहसकै क्रममा समीकरणको बाटोबाट एकताको मर्म र भावनालाई उपेक्षा गर्नु उचित हुँदोरहेनछ भन्ने निष्कर्षमा पार्टी नेतृत्व पुगेको छ । पार्टी नेतृत्व त्यसमा कायम रहुञ्जेलसम्म पुनः सोही प्रकृतिको समस्या आउने छैन । त्यसरी नै सङ्क्रमणकालको अन्त्य र विवादका क्रममा उठेका वैचारिक र साङ्गठनिक प्रश्नको समाधान भने एकता महाधिवेशनबाट खोजिने छ । यस रूपमा अघि बढ्न सिङ्गो स्थायी कमिटी सहमत भएर नै अहिलेको प्रक्रिया अघि बढेको छ । जसप्रति पार्टीको सिङ्गो पङ्क्ति स्पष्ट र सकारात्मक देखिएको छ ।
पार्टी एकताको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा अन्तरपार्टी छलफल पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेका कारणले अहिले पनि केही अन्योल र अविश्वास अवश्य छ । तर एकता प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा अब पार्टीका सामु त्यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी नै प्रमुख बन्न पुगेको छ । यद्यपी त्यसका लागि विचारको संश्लेषण र नेतृत्वको केन्द्रीकरणको प्रश्न भने गम्भीर चुनौतीका रूपमा उपस्थित छ । जुन कुरा महाधिवशेनको माध्यमबाट समाधान गर्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको छ । दुई अध्यक्षका बीचको सहकार्यले पनि त्यसको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
महाधिवेशनको प्रक्रियामा त्यो अवसर प्राप्त हुनेछ । जसले पूर्व समूहको मनोविज्ञानलाई जोड्ने र एकताको आधारलाई बलियो बनाउने काम गर्ने छ ।
अहिले पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएका दुई अध्यक्षका सामु आफूले थालेको युगान्तकारी घटनालाई सफल बनाएर महानायक हुने कि यसको असफलतासँगै आन्दोलनको भविष्यलाई समाप्त हुन दिएर खलनायक हुने भन्ने दुई विकल्प तेर्सिएको अवस्था छ । सायद यही पक्षलाई महसुस गरेर नै उहाँहरु एकतातर्फ फर्कनु भएको छ ।
विगतको पृष्ठभूमिलाई वर्तमानका क्रियाकलापले जित्न अझै सकेको छैन । त्यसमाथि भविष्यको प्रश्नमा केन्द्रित रहेर बहस पनि सुरु भइसकेको छैन । महाधिवेशनको प्रक्रियामा त्यो अवसर प्राप्त हुनेछ । जसले पूर्व समूहको मनोविज्ञानलाई जोड्ने र एकताको आधारलाई बलियो बनाउने काम गर्ने छ ।
← देउवालाई पौडेल समूहको एक हप्ते अल्टिमेटम
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे ओली–प्रचण्डबीच अझै जुटेन सहमति →
८ आश्विन २०७७, बिहीबार प्राइम खबर डेस्क	0